ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးမှ အဖြုတ်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးမှ အဖြုတ်ခံရ
ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးမှ အဖြုတ်ခံရ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 14, 2018 in Best Web Awards, U.S. News | 1 comment
ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တီလ်လာစံကို သမတဒေါ်နွယ်ထွန်းမှ မနှစ်က တရုတ်ပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးသော အရွက်စုံသုပ်စားရန် ပြောခဲ့ကြောင်း အင်္ဂါနေ့ထုတ် ဝေါလ်စထရိဂျာနယ်တွင် ရေးသားသည်။
နိုဝင်ဘာလတုံးက ဒေါ်နွယ်ထွန်း၊ တီလ်လာစံ၊ အခြားယူအက်စ် ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများနှင့် အတူစားမည့် တရုတ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ဟင်းလျာစာရင်းတွင် ကေဆာအရွက်စုံ ပါဝင်ကြောင်း သတင်းဖေါ်ပြသည်။ ထိုအခမ်းအနားကို ဒေါ်နွယ်ထွန်း၏ အာရှခရီးစဉ်အတွင်း တရုတ်ပြည် မဟာတံတိုင်းကြီးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ယူအက်စ်ခေါင်းဆောင်များ အရွက်စုံသုပ် မစားခဲ့လျင် တရုတ် အာဏာပိုင်များအား စော်ကားသလို ဖြစ်သွားမည်ကို ဒေါ်နွယ်ထွန်း အစိုးရိမ်ကြီးခဲ့သည်။
ရက်စ် အရွက်စုံသုပ် စားနော်၊ ဒေါ်နွယ်ထွန်းမှ သူ့ နံပါတ်တစ် သံတမန်အား ပြောကြောင်း ဂျာနယ်သတင်းအရ သိရသည်။
တီလ်လာစံမှ သမတ၏ စကားကို ရယ်စရာသဖွယ် တုံ့ပြန်သည်။
ဂျာနယ်မှ ထိုအဖြစ်အပျက်အား ထွန်းနှင့်တီလ်လာစံအကြား အခါအားလျော်စွာ ဖြစ်လေ့ရှိသာ တင်းမာမှုအဖြစ် တင်ပြသည်။
တီလ်လာစံအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးမှ ဖြုတ်ပစ်ခြင်းကို ဒေါ်နွယ်ထွန်းမှ အင်္ဂါနေ့ နံနက် တွစ်တာလူမှုကွန်ယက်တွင် ရေးသားထားပြီး သူ့နေရာတွင် စီအိုင်အေ ညွှန်ကြားရေးမှုး မိုက် ပွန်ပီအိုနှင့် အစားထိုးသည်။
ရာထူးမှ အဖြူတ်ခံရသော ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တီလ်လာစံ အင်္ဂါနေ့တွင် နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းပြောစဉ်
သူ့ကို အလုပ်မဖြုတ်ခင် ဒေါ်နွယ်ထွန်းနှင့် တီလ်လာစံ စကားပြောဆိုမှု မရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် ဘာကြောင့် သူ့ကိုဖြုတ်သည်ကို တီလ်ာစံ မသိကြောင်း လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စတိဗ်ဂိုလ်းဒ်စတိန်းမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောသည်။ ယင်းမှာ အိမ်ဖြူတော်မှ အလုပ်ဖြုတ်ခြင်းအပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်မှုနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်သည်။
ဂိုလ်းဒ်စတိန်းအား အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် အိမ်ဖြူ တော်မှ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် သူ၏နောက်ဆုံးနေ့မှာ မတ်လ၃၁ရက်နေ့ ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ့တာဝန်များကို ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ဆာလီဗန်အား အင်္ဂါနေ့ အလုပ်ချိန်အပြီးတွင် လွှဲအပ်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် တီလ်လာစံပြောသည်။
အလုပ်ထွက်သွားသူ နံပါတ်တစ် သံတမန်ကြီးက သူ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ဝန်ထမ်းများအား ကျေးဇူးတင်ထားသော်လည်း ဒေါ်နွယ်ထွန်းအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မဖေါ်ပြထားပါ။
President Trump ordered Secretary of State Rex Tillerson to eatasalad served to U.S. diplomats duringatrip to China last year, The Wall Street Journal reported Tuesday.
The Chinese leaders had reportedly included Caesar salad on the menu foradinner with Trump, Tillerson and other top U.S. officials in November. The event was held in China’s Great Hall of the People during Trump’s tour of Asia.
Trump grew worried that the Chinese officials might be offended if the U.S. leaders didn’t eat the salad, the Journal reported.
“Rex, eat the salad,” Trump told his top diplomat, according to the newspaper.
Tillerson reportedly laughed off the president’s comment.
The Journal cited the incident as an example of the sometimes tense relationship between Trump and Tillerson.
Trump ousted Tillerson as secretary of State inatweet Tuesday morning, replacing him with CIA Director Mike Pompeo.
Under Secretary of State Steve Goldstein said that Tillerson did not talk to Trump ahead of his dismissal and that Tillerson was “unaware” of why he was fired, contradicting the White House’s account of the firing.
The White House fired Goldstein later Tuesday.
Tillerson said Tuesday afternoon that his last day at the State Department would be March 31, and that he was delegating his duties to Deputy Secretary of State John Sullivan at the end of Tuesday.
The outgoing top diplomat thanked State Department staffers in his remarks, but did not thank Trump.